Ooni ahụ, onye wụchara na steeti ahụ iji wee sonye na mmemme agba nke iri na isii nke Ịgba Ọfara eze ọdịnala Ọnịcha bụ Igwe Nnaemeka Achebe, toro gọvanọ Obianọ maka ezi ọhụhụ ụzọ ya na mnwogharị ọ na-eweta na steeti ahụ, ma sịkwa na steeti Anambra na ala Naịjiria bụ nnọọ ndị nwere Chi ọma site n'inwe mmadụ dịka gọvanọ Obianọ, ọkachasị n'oge ugbu a ọnọdụ akụnụba ala anyị dị ihu na ọnụ ka ntọọ.
Ya bụ nnukwute onye ndu n'ala Yoruba gakwara n'ihu kọwaa na ọbịbịa ya ahụ bụ otu n'ime mbọ ọ na-agba ịhụ na e nwere udo tọrọ àtọ na ezi mmekọrịta nke mmadụ na ibe ya n'ala anyị, ma kwukwa na ọ na-eweliri gọvanọ Obianọ aka elu n'ihi ihe dị iche iche o mepụtagoro, ma rịọziekwa amamihe Chineke n'isi ya bụ gọvanọ iji wee gaa n'ihu n'ibuli steeti ahụ n'ezi ọnọdụ.
N'okwu nke ya, gọvanọ Obianọ kwuru na mkparịta ụka ha gbadoro ụkwụ na nhọpụta ọkwa gọvanọ ahụ na-abịa n'ihu na steeti ahụ, bụkwa nke Ooni ahụ kpere ekpere ka ọ gaziere ya.
Govanọ ahụ gosipụtara olile anya ya na site na nkwado ọ na-enweta n'aka ndị Anambra na ezi aka ebe ụmụafọ obodo ndị ọzọ, na otu pati APGA ga-eturu ugo n'ụzọ dara ụda na nhọpụta ahụ na-abịa n'ihu n'ọnwa Nọvemba.
Otu nwa amadi a ma ama n'ịzụ ahịa, bụ maazị Ernest Obiejesi, onye soro Ooni wee bịa ya bụ mmemme, sị na ọ bụghị naanị na ndị Anambra nwere gọvanọ ọnọdụ ụmụ mmadụ na-emetụ n'obi, kama ezi onye ndu gosigoro na ọ bụ ọkaibe n'ebe nhazi dị.
Ọ sị na enyi gọvanọ Obianọ nwetagoro site n'agbụrụ dị iche iche n'ala Naịjiria egosipụtala na ọ bụ ezi onye ndu na-adịghị akpa oke, bụ onye nwere ọdịmma nke ala Naịjiria n'obi.